“Aniga iyo Zlatan waxaan isku dilnaa Tababarka.”. Marcos Rojo – Gool FM
Fursad intee la eg ayuu Pogba u heystaa inuu soo laabto kulanka Manchester derby
Goolhaye Kepa Arrizabalaga oo ka baryey Kooxda Chelsea inuu baxo
“Aniga iyo Zlatan waxaan isku dilnaa Tababarka.”. Marcos Rojo
Byare November 28, 2017
(Manchester) 28 Nof 2017. Daafaca Man United Marcos Rojo ayaa daaha ka rogay inay tababarka kooxda isku dilaan Zlatan Ibrahimovic isla markaana lagu amray inay is dajiyaan si looga hortago inay is dhaawacaan.
Labada laacib ee dhaawacmay isku waqtiga kulankii dhacay April isla markaana gaaray isla dhaawaca, isku waqtina garoomada ka maqnaa ayaa dhawaan dib u soo laabtay.
Tababare Jose Mourinho ayaa u muuqda inuu doonayo inuu taam ahaansho ku haayo labada laacib isagoo ka hor tagayo sida adag ay tababarka isugu jilaafeeyaan.
“Had iyo jeer wuu faraxsan yahay, wuxuu u dhow yahay ciyaartoyda waa shaqsi aad u farxad badan, aad ayuu ii caawiyay aniga si uu teyda ugu fiican iiga soo saaro,” Rojo ayaa sidaa u sheegay Clarin.
“Wuxuu markasta inoo sheegaa inaan u ciyaarno si degan tababarka maxaa yeelay waxaan Ibra isku dilna laadad.
“Wuxuu leeyahay dabeecad cajiib ah, laakiin kuwa aan garaneyn isaga wuxuu u muuqdaa sida qof isla wayn laakiin waa qof aan caadi ahayn, waa xawayaan horey u sii soconaya isla markaana doonay inuu ku guuleysto wax kasta.
“Waxaan waydiiyay Ibra haddii uu jeclaan lahaa inuu koobka adduunka ka qeyb galo , wuxuu ii sheegay Maya laakiin ma garanayo…. Aniga ahaan waa inuu aadaa koobka adduunka.”.
Taallo tii hore u eg oo loo taagay Ronaldo!
Lionel Messi oo ka dalbaya Barcelona inaysan la soo saxiixan Mesut Ozil